Isu takaedza iyo Moshi Digits, akanyanya magiravhusi eiyo skrini ye iPhone yedu | IPhone nhau
Isu takaedza iyo Moshi Digits, akanyanya magiravhusi eiyo skrini ye iPhone yedu
Zvichida kuti vazhinji venyu munozviwana muchivhura zvakawanda zvezvipo izvo zvamakapihwa nehama dzenyu, vamwe vazhinji vachatomirira kusvika munaJanuary 6 anotevera, Zuva reMadzimambo, zuva iro zvipo zvakawanda zvinopihwawo pachinyakare. Asi, Chii chekupa kune anoda tekinoroji? Nhasi tinokuunzira zano risingadhuri iro chero mudiwa wegajeti achakutenda naro.
Wakamboshandisa magurovhosi ne iPhone yako? Iwe unenge waziva matambudziko ese anosanganisira izvi, uye ndizvo iva wakagadzirira kushandisa zvigadzirwa zvemagetsi pane tembiricha yakaderera. Imwe nguva yapfuura ndaive nemagirovhosi ayo iwe aunogona kushandisa nhare yako pasina dambudziko. Yekuparadzira, muzuva ravo vaive chipo chemafashoni chekushambadzira kwekambani. Asi kwete, vanga vasiri sarudzo hombe, anga ari magirovhusi asina kushandisa zvakanaka izvo zvavaive: magirovhosi. Ini handina chokwadi chekuti mumwe munhu anowana magirovhosi akanaka uye "gadget" yekubata nayo skrini yemidziyo yedu. Iyo Moshi Digits chimwe chakasiyana....
Kwenguva yakati ndanga ndiine iyo iPhone 7, munoziva, paive nenhau zhinji dzaitaura kuti haungazomboshandisa magurovhosi zvakare, zvisinei kuti anga akagadzirira sei zvigadzirwa zvemadhijitari, neiyo nyowani Bhatani reImba yeiyo iPhone, ine Moshi Digits unogona ... Uye ndizvo izvo magurovhosi akarukwa nenylon neshinda dzesirivha, chimwe chinhu chinovaita kuitisa kuitira kuti tigone shanda pasina matambudziko nechidzitiro chemidziyo yedu. Ehe, pane sarudzo dzakachipa dzine ma conductive glues pamunwe wako, asi Moshi Digits inoenda kumberi, haidzikire uye iwe unogona kuishandisa mune chero mamiriro ezvinhu pasina dambudziko. Ndinoenderera mberi, unogona kubata iyo iPhone (iyo skrini yechigadzirwa chako) ne chero chikamu cheruoko rwako chinozopindura sekunge wanga usina kupfeka magirovhosi. Zviripachena kuti Kubata ID hakushandi, chimwe chinhu chinogadziriswa nekupinda kodhi yekuvhura nemaoko.
ari Moshi manhamba kuti isu takaedza, iwo aunoona mumifananidzo, akanyatsogadzikana uye haana kupa chero dambudziko kune iyo pindirana nezviratidziro zveiyo iPhone, zvakafanana neApple Watch kana neiyo iPad. Unogona kuvawanira iwo 35 €, mutengo usinganyanyisa kana isu tichifunga nezvekuti isu tiri kutaura nezve zvemhando magirovhosi. Zvese izvi kubva kune zvavo Moshi yepamutemo webhusaiti.
Saka unoziva, kanganwa nezve magirovhusi asingavande, uye zvakanyanya kushoma rega kucheka zvigunwe zvemagirovhosi ako akajairwa.
Kudzokorora kwe: Karim Hmeidan
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Isu takaedza iyo Moshi Digits, akanyanya magiravhusi eiyo skrini ye iPhone yedu
NoLocation, yemahara kwenguva shoma